अल्ट्रासोनिक कूल मिस्ट वाइफाइ स्मार्ट ह्युमिडिफायर China Manufacturer
विवरण:औद्योगिक अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर,फ्यानको साथ ह्युमिडिफायर,सम्पूर्ण घर Humidifier
Home > उत्पादनहरू > स्मार्ट ह्युमिडिफायर > अल्ट्रासोनिक कूल मिस्ट वाइफाइ स्मार्ट ह्युमिडिफायर
स्मार्ट WI-FI टेक्नोलोजी: यो अविश्वसनीय अत्यावश्यक तेल विसारकले नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दछ ताकि तपाईं यसलाई केवल एक अनुप्रयोग प्रयोग गरेर यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ! तपाईको सुविधाका लागि प्रत्येक स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको लागि उपयुक्त TuyaSmart अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्, र प्युरिफायर खोल्नुहोस् वा बन्द गर्नुहोस् वा मोड परिवर्तन गर्नुहोस्। काठ अनाज विसारक अमेजन इकोसँग उपयुक्त छ त्यसैले यो सजीलो प्रयोगको लागि एलेक्सासँग कार्य गर्न सक्दछ।
आरामदायी ATMOSPHERE: यो सुगन्ध फैलाव सबै घर, कार्यालय वा योग स्टुडियोका लागि उत्तम छ ताकि तपाईं शान्त वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यस उपकरणले हावालाई शुद्धिकरण र आर्द्रता दिन्छ ताकि तपाईं सुक्खी छाला र ओठबाट ग्रस्त हुनुहुने छैन। गन्ध फैलावले उत्तम वातावरण सिर्जना गर्दछ त्यसैले तपाईं सास फेर्न र सुत्न सक्नुहुनेछ, आराम गर्न सक्नुहुन्छ, र पहिले भन्दा राम्रो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ!
यसलाई तपाइँको आवश्यकतामा समायोजित गर्नुहोस्: एयर प्यूरिफायरसँग ml०० मिलीलिटरको ठूलो क्षमता छ त्यसैले यसले उत्कृष्ट परिणामहरूको लागि रातभर काम गर्न सक्दछ। घर डिफ्यूजरको प्रकाश निस्क्रिय वा डिम गर्न सकिन्छ ताकि यसले तपाईंको निन्द्रामा कहिले बाधा पुर्‍याउँदैन। एयर ह्युमिडिफायरले तुयास्मार्ट अनुप्रयोगमार्फत समय तालिका सेट गर्न सक्दछ, ताकि तपाई यसलाई हरेक पटक अधिकतम परिणामको लागि आफ्नो आवश्यकतामा समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ।
पूर्ण रूपमा सुरक्षित: डिटुओ अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजर पूर्ण रूपमा विषाक्त-मुक्त छ त्यसैले यो सबैको लागि पूर्ण सुरक्षित हुन सक्छ, साना बच्चाहरूलाई पनि! तपाईं यसलाई सुरक्षित रूपमा दैनिक रूपमा तपाईंको अन्तरिक्षमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईं अझ राम्रा विश्रामको लागि निदाइरहनुभएको बेला पनि। जब पानीको बाहिर हुन्छ, यो स्वचालित रूपमा कम बिजुली खपतका लागि काम गर्न रोकिन्छ।
काठ अनाज विसारक चित्रहरु:
शयनकक्ष बिग कोठाहरूको लागि स्मार्ट कन्ट्रोल भापोरइजर ह्यूमिडिफायर अब सम्पर्क गर्नुहोस्
अलेक्सा सफा धुंध स्मार्ट आवश्यक तेल विसारक ह्यूमिडिफायर अब सम्पर्क गर्नुहोस्
एयर नवाचार ईको मैत्री स्मार्ट वाष्पीकरण ह्यूमिडिफायर अब सम्पर्क गर्नुहोस्
सर्वश्रेष्ठ वुड ग्रेन स्मार्ट होम कोठा अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायरहरू अब सम्पर्क गर्नुहोस्
एलेक्सा कम्प्याटिवल सम्पूर्ण स्मार्ट पानी फोग ह्युमिडिफायरहरू अब सम्पर्क गर्नुहोस्
एलेक्सा स्मार्ट अल्ट्रासोनिक सुगन्ध विसारक आवश्यक तेल संग अब सम्पर्क गर्नुहोस्
औद्योगिक अल्ट्रासोनिक ह्युमिडिफायर फ्यानको साथ ह्युमिडिफायर सम्पूर्ण घर Humidifier